Alahady 01 Aogositra 2021 - FJKM Amparibe Famonjena
ALAHADY faha 01 AOGOSITRA 2021
ALAHADY IVOM-BOKATRY NY SAMPANA LEHILAHY KRISTIANA
“Fa asany isika, voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara, izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy”. Efesiana 2 :10
Anio dia alahady voalohany amin’ny volana aogositra 2021 dia fotoana izay ibanjinana eto amin’ny sahan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara ny lohahevitra fitaizam-panahy vaovao manao hoe : « MIORENA AMIN’NY ASA TSARA ». Anio dia alahady faha 9 manaraka ny Trinite ary ho an’ny Fitandremana Amparibe Famonjena manokana dia natao ho fiaraha-miombom-bavaka amin’ny Sampana Lehilahy Kristiana noho ny Ivom-bokatry ny Sampana.
Ny Mpitandrina Ramilison Diamondra no nitarika ny fanompoam-pivavahana ka ny Litorjia Voalohany fampiasa eto amin’ny Fiangonana no notanterahina. Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny Tenin’Andriamanitra.
Rehefa nanao ny Fiarahabana apostolika ny mpitarika dia nanolotra ny teny Fiderana sy Fisaorana an’Andriamanitra entin’ny Fiangonana manandratra Ilay Tsitoha tamin’ny famakiana ny Salamo faha 28 :1-7 “Hianao no antsoiko, Jehovah ô, Ry vatolampiko ô, aza manentsin-tadiny amiko; fandrao, raha mangina amiko Hianao, dia ho tahaka izay midina any an-davaka aho. Mihainoa ny feon’ny fifonako, raha mitaraina Aminao aho, raha manandratra ny tanako ho amin’ny fitoeranao masina indrindra aho. Aza atao indray manakipaka amin’ny ratsy fanahy sy ny mpanao meloka aho, fa ireny dia milaza fihavanana amin’ny namany, kanjo ratsy no ao am-pony. Manomeza azy araka ny asany sy ny faharatsian’ny ataony; eny, manomeza azy araka ny vitan’ny tànany, valio izy araka izay iendrehany. Fa tsy mihevitra ny asan’i Jehovah, na ny vitan’ny tànany, izy, dia horavan’i Jehovah izy, fa tsy haoriny. Isaorana anie Jehovah, fa efa nihaino ny feon’ny fifonako Izy. Jehovah no heriko sy ampingako; izy no nitokian’ny foko, ka voavonjy aho; dia mifaly ny foko, ka ny hirako no hiderako Azy.” Amena!
Rehefa izany dia natao ny hira Ffpm faha 18 and.1 sy 2 “Ny feonay rehetra izao”, nentina nidera ny Tompo.
Izao no vavaka nentin’ny Fiangonana niderana sy nisaorana an’Andriamanitra tamin’ity fotoana ity:
“Ry Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina ô! Tompo sy Mpahary Ianao, indreto izahay olona noforoninao, zanaka malalanao. Tafavory eto an-tranonao indray izahay amin’ity andro voalohany amin’ny herinandro ity, hilaza ny hatsaranao sy ny mba haharianao anay indray hitovy endrika amin’ilay Zanakao, ary hankalaza sy hanome voninahitra anao. Sokafy ny molotray mba hanambara fiderana Anao ny vavanay. Ianao ilay Andriamanitra tsy miova, omaly sy ho avy ary mandrakizay. Mampitoetra ny fitiavanao sy ny famindram-ponao Ianao, tsy takatry ny sainay ny fahalebiazanao. Koa izay kely hitan’ny masonay sy ren’ny sofinay amin’ny fombanao Andriamanitra, no hiankohofanay eto Aminao ankehitriny. Tsara Ianao. Ary mpanao ny tsara Ianao. Isaoranay ny fitahiana ka nitehirizanao anay nandritra iny volana lasa iny ka tamin’ny fotoana rehetra dia tsy mba navelanao ho irery izahay, teo anilanay mandrakariva Ianao nanohana, nanampy ary nampahery. Mankasitraka ry Tompo tsara noho ny amin’ireny rehetra ireny. Mankasitraka noho ny Sampana Lehilahy Kristiana izay natsanganao eto amin’ny Fiangonana. Afaka mankalaza Anao izahay
Ny sitrapon’Andriamanitra izay nambara tamin’ny Fiangonana manontolo satria notehirizinao izy ireo nandriatra ny 30 taona nitaizanao ny vahoakanao tamin’ny fanomezam-pahasoavana izay natolotrao azy. Mankasitraka Tompo noho ny amin’izany. Tohano fanahy mazoto izahay mba hahaizanay manome voninahitra Anao mandrakariva amin’ny androm-piainanay manontolo. Tohano izahay hahay hibanjina Anao, hahitanay ny herinao manavao anay, hahaizanay mampiorina ny finoanay ka hanaovana asa tsara maro. Amin’ny anaran’I Jesoa Kristy izay omem-boninahitra sy laza miaraka aminao Ray sy ny Fanahy masina. Amen”.
Manoloana ny sitrapon’Andriamanitra dia tsy nahatanteraka izany isika koa izao no vavaka nentin’ny Fiangonana nifona sy niaiky ny fahotany teo anatrehan’Andriamanitra.
Ny hira 358 and. 3 sy 4 “He ry namako mahantra” no hira nentina nifona tamin’ny Tompo.
Izao no teny famelan-keloka noraisin’ny Fiangonana: “Avia ary hifandahatra isika, na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon’ondry fotsy. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika, sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsy fahamarinana rehetra. Jesoa ilay marina, Izy no avotra noho ny fahotantsika. Amen!”
Voavela ny helokareo noho ny Anarany masina.
Ny hira 539: 2 “Faly dia faly” no noredonin’ny Fiangonana ho fisaorana ny Tompo tamin’ny famelana ny fahotana.
Ny olona voavela heloka dia sahy manambara ny finoany eo anatrehan’ny olona sy Andriamanitra koa ny Fanekem-pinoana Apostolika no nentina nanambarana izany.
Andriamatoa Rajaofetra John no nanatanteraka izany. Ny Teny araka ny 1 Timoty 3: 1b “Raha misy olona maniry ny asan’ny Mpitandrina dia maniry asa tsara izy” no nitondrana ny hafatra.
Nisy ny tantara kely nentina nanehoana izany ary avy eo dia nisy ny vavaka.
TATITRY NY ASAN’NY SLK
Andriamatoa Rakotovololona Lova Nosy no nanatanteraka izany. 2 Tim. 1: 8a “koa aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompo” izany no teny fanevan’ny Sampana tao anatin’ny taon-jaobily ary nentiny niarahabana ny Fiangonana.
Nanambara ny zava-kendren’ny Sampana dia ny mitaona ny lehilahy hanankina ny fiainany sy ny ankohonany amin’Andriamanitra. Mampandroso ny Fiangonana amin’ny lafiny rehetra.
Mandray andraikitra eo amin’ny sehatra misy azy.
Ireto kosa ny asa notanterahina:
Teo ny famangiana ny FJKM Antanetibe Fitiavana any Ambatomanga,
Teo ny famangiana ny Kolejy teolojika Ivato,
Ny famangiana ny Toeram-pitaizana eny Tangaina
Nisy ny fizarana fanomezana ho an’ny mpianatra Soratra Masina
Hotanterahina ny famangiana ny TOPAZA
Nanolotra fitaovam-pihinanana 50 isa ho an’ny Fiangonana ny SLK.
Nanatanteraka ny hirany ny sampana taorian’ny tatitra:”Ny Fanahin’ny hazofijaliana”.
Ny Biraom-piangonana Razafimaharo Mamy no nanatanteraka izany ka ny I Kor. 3: 17b “Fa masina ny tempolin’Andriamanitra dia ianareo izany” no nentiny niarahabana ny Fiangonana.
Ity alahady ity no Ivon’ny faha 30 taonan’ny SLK.
Hisy ny fitsofan-drano ny Mpitandrina Ramilison Diamondra.
Nambaran’ny Mpitandrina fa fanombohana ny asa amin’ny trano atsimo ny zoma 06 aogositra 2021 amin’ny 9 ora maraina. Hisy ny fitondrana am-bavaka ny fanatanterahana ny asa amin’io fotoana io.
Natao ny fiarahabana ny zanaky ny Fiangonana nanatanteraka ny fanambadiany, Andriamatoa Rabenandrasana Arijaona Andrianina sy Ramatoa Ratolojanahary Arena Valisoa
Nisy ny vavaka ho azy ireo tamin’izany.
FIARAHABANA IREO NAHATRATRA NY TSIGERINTAONA
Ny Teny nentina niarahabana azy ireo dia araka ny hita ao amin’ny Zakaria 2: 9
Nisy ny rakitra nataon’ireo nahatratra ny tsingerintaona teny amin’ny alitara. Miisa 35 ireo mpianakavin’ny finoana nanatanteraka izany.
Ny Hira 808 and. 1 sy ny HF 14 and. 1 nanatanterahana ny rakitra alitara.
Ireto no hira nangatahan’ny mpianakavin’ny finoana: HAFA: “Tsy nomenao “; FF10: 1; FF 7:1; FF22:1; FFPM 20:1; FF 28:1
Tao ny nisaotra an’Andriamanitra noho ny fanambadiany;
Tao ny tokantrano mikasa hanatanteraka ny fanamboarana trano;
Nisy ny zanaky ny Fiangonana nahatratra ny fitsingerenan’ny taona nahaterahany;
Teo koa ny zanaky ny Fiangonana afaka fanadinana BEPC sy CEPE;
Nisy ny nisaotra an’Andriamanitra noho ny fahavitan’ny “Concert d’orgue”;
Misy ny nangata-bavaka ho famitana ny «Mémoire de fin d’études ».
Ny hira 275: 2 « He Anao ry Tompo soa » no nanavaozana ny fanoloran-tena sy nanolorana ny rakitra.
Ny hira mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia ny FFPM 244: 1, 2: “Ry Jesoa mba henoinao”.
Ireto kosa ny perikopa izay voalahatra hovakiana androany, ny Deotoronomia. 15:7-11; Matio 6: 1-4; Efesiana 2:8-10.
Andriamatoa Rabako Ralambonirina Jean Jacques no nitari-bavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina ary namaky ny Testamenta Taloha.
Ramatoa Rakotovololona Zinaha no namaky ny Testamenta Vaovao sy ny epistily.
Ny hira 163: 1, 3 no nohirain’ny Fiangonana mialoha ny toriteny.
Ny Mpitandrina Raharijaona no nitory ny Tenin’Andriamanitra.
Ny Teny dia araka ny Efesiana 2: 10 no nentiny nitondrana ny hafatra.
Ny Lohahevitra fitaizam-panahy vaovao amin’ity volana ity dia ny hoe “MIORENA AMIN’NY ASA TSARA”.
Tafiditra ao anatin’ny tendry mialoha roa sosona ihany koa ity teny ity.
1-NOFORON’ANDRIAMANITRA ANAO ASA TSARA ISIKA
Ny antom-pisiantsika dia ny mba hanatanterahantsika ny asa tsara.
Ny hilazana izany dia voalohany: Fiantrana ho an’ny rahalahy malahelo.
Ao anatin’ny taom-pahafahana dia famotsorana ny trosa no tanterahina.
Asa tsara, atao am-pitiavana izany mba hanafaka azy amin’ny fahasahiranany.
Rehefa tanteraka izany dia fitahiana ho an’ny Fiangonana mahatanteraka izany.
Namboarin’Andriamanitra ho amin’izany isika ka fitahiana no vokatr’izany.
Fa raha tsy tanterahina izany dia fiampangana antsika izany kanefa isika dia noforonin’Andriamanitra ahatanteraka asa tsara.
2 – NAMBOARINA MBA HANDEHA AMIN’IZANY ISIKA.
Ny nahatongavantsika ety ambany masoandro dia ny mba hahatonga ny fikasan’Andriamanitraa mba ho tanteraka.
a/ Hitsimbina ny namana
b/ Olona natao hanampy ny namany sy ny fianakaviana amin’ny fo tsotra tsy misy fireharehana fanentanana ho an’ny Fiangonana tokoa izany.
Amin’ity alahady ity dia manana ny mpanompon’Andriamanitra izay nahavita ny fianarany isika ary handeha hitory sy hanao ny asa tsara; koa ny fanohanana izany no takiana amin’ny Fiangonana.
Alahadin’ny Sampana SLK ity alahady ity. Manana ny teny faneva hoe aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompo ry lehilahy mahery. Mila fanohanana sy fanampiana izany.Izao fotoana izao ihany koa no hilana ny fanampiana ny ankizy sahirana amin’ny fanatanterahany ny fianarany.
Rehefa miaina sy mivelona amin’ny sitrapon’Andrioamanitra amin’izay nanirahany antsika isika dia tafaorina amin’Andriamanitra isika.
Nanana ny anjara hirany ny Hasin’ny Famonjena : “Misy asa tsara”.
Tamin’izany no nisaorana an’Andriamanitra noho ity fotoana ity. Nanehoana fa ny antom-pisian’ny Fiangonana dia ny fanaovana asa tsara.
Nisaotra an’Andriamanitra noho ny mpianakavin’ny finoana nanatanteraka ny raki-pisaorana.
Fitsofan-drano sy fisaorana ny mpanompon’Andriamanitra izay nanao ny fizaran’asa teto amin’ny Fiangonana no notanterahina tamin’izany.
Ny mpanompon’Andriamanitra Ramilison Diamondra no nanehoana izany fankasitrahana izany.
Ny Teny araka ny Mpitsara 6:14 no nentina nampaherezana azy tamin’izany.
Nisy ny vavaka ho an’izany mpanompon’Andriamanita izany.
Niroso avy hatrany amin’ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo ny Fiangonana avy eo.
Taorian’ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo dia natolotra ny hafatra ary nambara ny Tondrozotra 2021 ary noraisina ny Tsodrano.
Ny Hira 176 and. 6 no namaranana izao fanompoana masina izao.
Soratra: Rabako Tovohery
Fanamafisam-peo: Harentsoa Rova
Orga: Rajaofetra Philippe, Rabiazamaholy Mahery sy ny SMZM.